dhiri: tora iyi qi-inogoneswa samsung inokurumidza kuchaja isina waya kuchaja inomira ye $ 27.99 (31% yabviswa)!
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Bata iyi Qi-inogoneswa Samsung Fast Charge isina waya yekuchaja stand ye $ 27.99 (31% yabviswa)!
Deal: Bata iyi Qi-inogoneswa Samsung Fast Charge isina waya yekuchaja stand ye $ 27.99 (31% yabviswa)!
Samsung Fast Charge Qi-inogonesa isina waya yekuchaja stand Kuba Mazuva Ose Nyowani $ 27.99 ($ ​​40.95)
31% yabviswa N / A.
BATA IZVI PANO
Ngatitaurei nazvo, vanhu, kuchaja foni yako netambo kuri kuwedzera kushomeka. Parizvino pane akawanda emidziyo yekuchaja isina waya iyo inobvisa kunetseka kwetambo nemachiteshi, uye nerombo rakanaka, chimwe chezvinhu izvi zviripo parizvino chiri kunakidzwa nekutapudza kukuru.
Iyo Qi-inogoneswa Samsung Fast Charge isina waya yekuchaja pari parizvino yakadzikiswa kusvika ku $ 40.95 paSamsung & apos; yavo yega e-chitoro, asi Daily Kubira kuri kuchipa icho kunyange chakachipa mutengo!
Ichi chigadzirwa cheSamsung, uye iyo Yekukurumidza Charge tekinoroji (inobhadharisa 1,4x nguva nekukurumidza kupfuura zvakajairwa) inoenderana chete neakakwira-magumo Samsung nhare dzakadai seGreen Note 5, Galaxy S6 kumucheto +, Galaxy S7 / S7 kumucheto, uye Galaxy S8 / S8 +, zvichingodaro. Nekudaro, chero smartphone inowirirana neQi (nyowani iPhone 8, 8 Plus, uye X inosanganisirwa) inogona kubhadhariswa nguva dzose kumhanya.
Zvese zvaunoda kuti uite kuti ushandise sitendi ndeyekuibatanidza kune tambo yekuchaja uye woisa foni yako pachigadziko. Samsung yawedzera Fast Charge Wall Charger kune iyo bundle, saka haufanire kushandisa apos yako kushandisa mudziyo. Iyo yakavakirwa-mukati LED chiratidzo chinokuzivisa iwe kana nharembozha yako isina kunyatsoenderana uye kana yakanaka kuchaja kurongeka kwakawanikwa.
Kana chibvumirano ichi chikamutsa kufarira kwako, chinongedzo cheDaily Steals chinogona kuwanikwa pamusoro. Shanyira iyi link kuitira kuti uone kana foni yako iri Qi-inoenderana. Ramba uchifunga kuti kana iwe ukaona chimwe chinhu senge 'IQi Nhare kana UniQi inodiwa' pazasi pezita refoni yako, iwe & apos; unofanira kutenga imwe yekuwedzera-on kuitira kuti ugone kubhadharisa isina waya.
xperia xz premium isu zuva rekuburitsa
Apple & apos; s Chiitiko chaKurume chinogona kusanganisira nyowani nyowani, iPod touch uye zvimwe
Google Mubatsiri mutyairi modhi zvishoma nezvishoma kubuda kune dzimwe nyika
Deal: Yakagadziriswazve Samsung Galaxy Tab A 8.0 yakadzikiswa ne43% paWalmart
Akanakisa matanda kesi ye iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Samsung Imwe UI inobvumidza iwe kukiya yako yekumusoro skrini dhizaini
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Galaxy S10 Uye